छोरीको ‘खुशी चाहने’ रामअयोध्या र सीतादेवीमा किन आइपर्‍यो यस्तो बज्रपात?
छोरीको ‘खुशी चाहने’ रामअयोध्या र सीतादेवीमा किन आइपर्‍यो यस्तो बज्रपात? मध्यरातमा किशोरीको हत्या : शोक र त्रासमा लौकाहा
नेपाली पब्लिक बिहीबार, कात्तिक २७, २०७७
रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका–७ लौकाहाका रामअयोध्या साह व्यापार गर्छन्। साहको काममा सहयोग गर्छिन् उनकी श्रीमती सीतादेवीले। मध्यम् वर्गीय साह परिवार राम्रैसँग चलेको छ।
तर, बुधबार मध्यरातमा रामअयोध्या र सीतादेवीमाथि सोच्दै नसोचेको विपद् आइपर्‍यो। मध्यरातमा नकावधारी आए। र, साह दम्पत्तिकी छोरी अमृताकुमारीमाथि गोली प्रहार गरे।
घटनापछि रामअयोध्या स्तब्ध छन्। सीतादेवी त छोरीको हत्यापछि पटक–पटक अचेत हुन्छन्। छेउमा बसेका आफन्तले पानी दिन्छन्। ओठमुख सुकेको छ। गला अवरुद्ध छ। आँखामा बलिन्द्र आँशुको आहात छ।
छोरीको विवाहपछि साह परिवारमा आएको पीडा
साह दम्पत्तिले वि.सं. २०७६ फागुन २५ गते छोरी अमृताकुमारीको विवाह गरिदिए। सर्लाही विष्णुपुर गाउँपालिकाका रुपेश साह (सोहन) सँग मागी र राजीखुशी विवाह भयो अमृताकुमारीको।
चैतभरि राम्रै थियो। त्यसबीचमा अमृता र रुपेश माइती–ससुराली आए। तर, वैशाख महिना शुरु भएपछि उनीहरूको वैवाहिक जीवनले अर्कै मोड लियो।
रुपेशमाथि चक्कु प्रहार गरी हत्याको प्रयास भयो। उनी गम्भीर घाइते भए। ३ महिनाको उपचारपछि रुपेश ठिक भए। तर, त्यसबीचमा बढेका घटनाक्रमले रुपेश र अमृताकुमारी एकैसाथ बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगे।
रुपेश निको भएपछि गत साउन २५ गते अमृताकुमारीसँग सम्बन्धविच्छेद गरे। त्यसबीचमा लगातार धम्की र आक्रमणको प्रयासले उनीहरू छुट्टिने निष्कर्षमा पुगे। विवाह गरेर पठाएको छोरी खुशी नहुन नसकेपछि रामअयोध्याले पनि सम्बन्धविच्छेद गरेर घरमै बस्न भनेका थिए।
सम्बन्धविच्छेद भएपछि अमृताकुमारी माइतीमै बस्न थालिन्। रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका–७ का वडाअध्यक्ष कुमार यादवका अनुसार बुधबार खानपिन गरेर सुतिसकेपछि मध्यरातमा अमृताकुमारीमाथि गोली प्रहार भएको हो।
‘अमृताकुमारीका बुवाको दोहान छ, घटना कसरी भयो भन्ने खुलिसकेको छैन, अनुसन्धान प्रक्रिया प्रहरीले शुरु गरिसकेको छ, हामीले अनुसन्धान प्रक्रिया चाँडै सम्पन्न गरी अभियुक्तलाई कानूनी कारबाही गर्न अनुरोध गरेका छौं,’ अध्यक्ष यादवले नेपाली पब्लिकसँग भने।
यादवका अनुसार अमृताकुमारीको दायाँ कञ्चटमा गोली प्रहार भएको छ। घटनास्थलमै मृत्यु भएकी अमृताकुमारीको शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल लगिएको उनले बताए।
हत्या रहस्यमय, लौकाहामा त्रास
किशोरीको हत्यापछि लौकाहामा त्रास र शोकको माहोल छ। रौतहट जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी भरत श्रेष्ठले अमृतादेवीकी आमा सीतादेवी साह शौचालय गएका बेला अज्ञात व्यक्ति प्रवेश गरी उनको टाउकोमा गोली प्रहार गरेको खुलेको बताए।
गोली चलेको आवाज सुनेपछि शौचालयबाट घरभित्र जाँदा छोरी छटपटाइरहेको अवस्थामा भेटेको सीतादेवीले बताइन्। गोली लागेको केही समयपछि नै अमृतादेवीको मृत्यु भएको हो।
प्रहरीले घटनामा संलग्न अभियुक्तको खोजी कार्य शुरु भएको र आवश्यक अनुसन्धान पनि प्रारम्भ भएको बताएको छ। ‘प्रेम सम्बन्धका कारण घटना भएको देखिन्छ, अनुसन्धान हुँदैछ,’ डिएसपी श्रेष्ठले नेपाली पब्लिकसँग भने।
डिएसपी श्रेष्ठले राति ११ः३० बजे किशोरीको हत्या भएका जानकारी दिएका छन्। परिवारका सदस्यसँग बयान लिने तथा घटनास्थलमा भेटिएका प्रमाण र अन्य सम्भावित प्रमाणका आधारहरू खोजी गरेर प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेको छ।
मध्यरातमा गोली प्रहार गरी किशोरीको हत्या, साउनमा सम्बन्धविच्छेदपछि भयो यस्तो घटना
#हत्या #रौतहट #अमृताकुमारी_साह #माधवनारायण_नगरपालिका #रामअयोध्या_साह #सीतादेवी_साह
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक २७, २०७७ १९:१५